Mukuru weProphetic Healinga and Deliverance Ministries VaWalter Magaya
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, inoti yakamira kuferefeta nyaya yaipomerwa VaWalter Magaya veProphetic Healing and Deliverance Ministries, yekuita tanga wandida kumadzimai emusvondo mavo mushure mekunga VaMagaya vapikisa ongororo iyi kudare reHigh Court. Godwin
Mugwaro rekomisheni iyi rakaturwa kuparamende, komisheni iyi inoti yainge yatotanga kuongorora VaMagaya mushure mekunge paita zvichemo zvekuti VaMagaya vaisabata nenzira yakanaka madzimai emusvondo mavo nevamwe vaienda kusvondo kwavo kunonamatirwa.
Zvichitevera zvichemo izvi, masangano anomirira madzimai munyika achishanda pasi peWomens’ Coalition akakurudzira Gender Commission nemapurisa kuti vaongorore nyaya iyi izvo zvakazoita kuti kimosheni iyi itange ongororo yayo sezvainosungirwa kuita pasi pemutemo weZimbabwe Gender Commission Act.
Gender Commission inoti haina kuzopedza ongororo sezvo VaMagaya vakapikisa danho iri kuHigh Court uko isati yanzwikwa.
Nyaya yaVaMagaya ndeimwe yenyaya makumi matanhatu dzakaongororwa nekomisheni iyi gore rapera.
Komisheni iyi inoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai kana kuti Sexual Harassment ndidzo dzainge dzakawanda, koitawo nyaya dzemhirizhonga mudzimba, kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nedzimwe.
Makambani akaferefetwa nenyaya dzeSexual harassment anosanganisira Department of Immigration, National Railways of Zimbabwe, Intertoll Zimbabwe neCasadella Buscuits Private Limited.
Sachigaro weWomen’s Coalition Muzvare Evernice Munando vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti nyaya dze sexual harassment dziri kuramba dzichikwira munyika.
Vanotiwo panofanira kudzikwa mitemo inoranga vanopara mhosva iyi vachiti pari zvino mitemo nematare edzimhosva zvinorerutsira vanopara mhosva iyi.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai , Amai Chido Madiwa, vaudza Studio 7 kuti komiti yavo inoshushikani zvikuru nekuwanda kuri kuita nyaya dze sexual harassment vachiti vazhinji vanoshungurudzwa havaman’ari.
Amai Madiwa vanotsangura kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti kunyange hazvo paine mutemo weDomestic Violence Act panotodiwa mumwe mutemo wekurwisa sexual harassment.
Gender Commission inoti kunyange hazvo dzimwe dzenyaya makumi matanhatu dzakamhan’ara dzakapera, dzimwe dzakaendeswa kumatare edzimhosva uye dzimwe kumapurisa.
Asi inotiwo yakasangana nedambudziko rekuti vamwe vaipomerwa mhosva vairamba kupindura mibvunzo kana kutadza kuenda kumisangano.